Ala nri ịghasa Extrusion Solid-mmiri mmiri Separator Dehydrator Machine Suppliers na Factory | YiZheng
Gịnị bụ ịghasa Extrusion Solid-mmiri mmiri Separator?
Na Rewghasa Extrusion Solid-mmiri mmiri separator bụ ọhụrụ n'ibu dewatering ngwá mepụtara site na-ezo aka dị iche iche elu dewatering ngwá n'ụlọ na mba ọzọ na ijikọta na anyị onwe anyị R & D na n'ichepụta ahụmahụ. NaRewghasa Extrusion Solid-mmiri mmiri separator nke a na-ejikarị na-achịkwa kabinet, pipeline, ahụ, ihuenyo, ihe nkedo, ihe na-ebelata, mpempe akwụkwọ, ibudata ngwaọrụ na akụkụ ndị ọzọ, akụrụngwa a maara nke ọma ma jiri ya na ahịa.
Nyocha gbasara akụ na ụba
1. Nri siri ike mgbe nkewa gasịrị na-eme ka njem na ọnụahịa dị elu maka ire ere.
2. Mgbe nkewa, a gwakọtara nri ahụ na ahịhịa ahihia iji kpalie nke ọma, enwere ike ịme ka ọ bụrụ fatịlaịza na-emepụta ihe mgbe granulation gasịrị.
3. Nri dị iche iche nwere ike iji mee ka mma ala dịkwuo mma, a pụkwara iji ya na-azụ ụwa, na-eto ero ma na-azụ azụ.
4. Mmiri mmiri ahụ kewara ekewa nwere ike banye na mmiri nke gas ugbu a, nrụpụta biogas na-arụ ọrụ dị elu, a gaghị egbochi ọdọ mmiri ahụ iji mee ka ọrụ ahụ dịkwuo ogologo.
Principlekpụrụ ọrụ nke ịghasa Extrusion Solid-liquid Separator
1. A na-agbapụta ihe na isi igwe site na mgbapụta na-enweghị mgbochi
2. Ebugharị gaa n'ihu akụkụ nke igwe site na ịpịpụta auger
3. N'okpuru nzacha nke eriri mgbatị, mmiri ga-apụ ma wepụ ya na ntanetị na nchara mmiri
4. Ka ọ dị ugbu a, nrụgide dị n'ihu nke auger na-aba ụba. Mgbe o ruru ụfọdụ uru, a ga-emeghe ọdụ ụgbọ mmiri na-emeghe maka nrụpụta siri ike.
5. Iji nweta ọsọ na mmiri ọdịnaya nke ihapu, ngwaọrụ njikwa n'ihu isi engine nwere ike gbanwee iji nweta ọnọdụ na-enye afọ ojuju na nke kwesịrị ekwesị.
Ngwa & Atụmatụ nke ịghasa Extrusion Solid-mmiri mmiri Separator
(1) Ọ nwere a dịgasị iche iche nke ngwa. Enwere ike iji nri ọkụkọ, nsị anụ ezi, nsị ehi, nsị ọbọgwụ, nsị atụrụ na nsị ndị ọzọ.
(2) Ọ metụtakwara ụdị ndị ọrụ ugbo niile dị obere na obere ma ọ bụ ndị na-azụ anụ.
(3) Akụkụ bụ isi nke Rewghasa Extrusion Solid-mmiri mmiri separator e mere igwe na igwe anaghị agba nchara, ma e jiri ya tụnyere ihe ndị ọzọ, igwe anaghị agba nchara adịghị mfe nchara, corrosion, ọrụ ndụ ogologo.
Rewghasa Extrusion Solid-mmiri mmiri separator Video Display
Rewghasa Extrusion Solid-mmiri mmiri separator Model Nhọrọ
Dayameta nke nyo ntupu
Dayameta nke uzo mmiri maka mgbapụta
Liquid ịrụ ọrụ n'ọdụ ụgbọ mmiri
Igwe ahụ bụ nke mgbatị ígwè, Auger aro na pupụtara na-nke igwe anaghị agba nchara 304, nyo ihuenyo ka nke nkpirikpi igwe anaghị agba nchara 304.
1. Nri na mgbapụta maka mmiri mmiri ala ihe
2. Nri hopper maka ihe siri ike nke ala
Ezi nri 10-20ton / h
Nri ezì kpọrọ nkụ: 1.5m3/ h
Ezi nri 20-25m3/ h
Nri a mịrị amị: 3m3/ h
Nke gara aga: Akpaka Dynamic Fatịlaịza batching Machine
Osote: Vetikal Disc inggwakọta feeder Machine